Lucifer (Season 4) – Myanmar Subtitles
Genre: Crime, Drama, FantasyActors: D.B. Woodside, Kevin Alejandro, Lauren German, Tom EllisCountry: USAReleased: 25 Jan 2016Networks: NetflixEpisodes: 10 Type: TVScore: 8.2Duration: 42 minQuality: 720p WebYear: 2015View: 2,602
Lucifer (Season 4) Complete
Lucifer Link ပကျြသှားတယျဆိုပွီး ပွောနကွေတဲ့သူတှအေတှကျ
Season4ကို Link ပွနျခြိတျပေးထားပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ကအခု Season4မှ Lucifer ကိုစပွနျတာပါ။
Season 1,2,3 ကို ကြှနျတျောလဲ Channel Myanmar ကနေ Download ဆှဲပွီးကွညျ့ခဲ့တာပါ။
Season5လာခဲ့မယျဆိုရငျလဲ အမွနျဆုံးဘာသာပွနျပွီး
Season 1,2,3 ကိုတော့ www.channelmyanmar.org
မှာသှားရောကျ Download ဆှဲကွညျ့ရှူနိုငျပါတယျ။
Translated By Zin Pyay, Lin Htike Aung, Zon Myat Noe Swe, Phyo Hay Mar Oo
Encoded By Lin Htike Aung
Download Size – Average 400 MB (720p Web × 264)
အညှနျး – Season3မှာတုနျးက Lucifer ရဲ့သရုပျမှနျကိုတှလေို့ကျရတဲ့ Chloe အနနေဲ့ဘယျလိုတှတေုံ့ပွနျမလဲဆိုတာ
ကြှနျတျောတို့အားလုံးကွညျ့ရှူရမှာပဲဖွဈပါတယျ။ Lucifer အနနေဲ့လဲ ကောငျးကငျဘုံကတမနျတျောပမေယျ့ ငရဲကိုအုပျစိုးရတဲ့
Devil ဖွဈနတေဲ့အခါ…. အားလုံးပဲဆကျပွောနရေငျ Spoil မိနမှောစိုးလို့ ကွညျ့ရှူလိုကျကွပါ။ ဒီအညှနျးက Season3ပွီးသှားပမေယျ့
အခုမှ Season4ကိုစပွီးကွညျ့ရှူမယျ့လူတှအေတှကျပါ။ Lucifer ကို Quality ကောငျးကောငျးနဲ့သိမျးထားခငျြတဲ့သူတှအေတှကျ
ကြှနျတျောတို့ Mmsubtitles ကနပွေီးတော့မှ ဘာသာပွနျပွီး တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။
Lucifer Link ပျက်သွားတယ်ဆိုပြီး ပြောနေကြတဲ့သူတွေအတွက်
Season4ကို Link ပြန်ချိတ်ပေးထားပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ကအခု Season4မှ Lucifer ကိုစပြန်တာပါ။
Season 1,2,3 ကို ကျွန်တော်လဲ Channel Myanmar ကနေ Download ဆွဲပြီးကြည့်ခဲ့တာပါ။
Season5လာခဲ့မယ်ဆိုရင်လဲ အမြန်ဆုံးဘာသာပြန်ပြီး
Season 1,2,3 ကိုတော့ www.channelmyanmar.org
မှာသွားရောက် Download ဆွဲကြည့်ရှူနိုင်ပါတယ်။
အညွှန်း – Season3မှာတုန်းက Lucifer ရဲ့သရုပ်မှန်ကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့ Chloe အနေနဲ့ဘယ်လိုတွေတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာ
ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြည့်ရှူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Lucifer အနေနဲ့လဲ ကောင်းကင်ဘုံကတမန်တော်ပေမယ့် ငရဲကိုအုပ်စိုးရတဲ့
Devil ဖြစ်နေတဲ့အခါ…. အားလုံးပဲဆက်ပြောနေရင် Spoil မိနေမှာစိုးလို့ ကြည့်ရှူလိုက်ကြပါ။ ဒီအညွှန်းက Season3ပြီးသွားပေမယ့်
အခုမှ Season4ကိုစပြီးကြည့်ရှူမယ့်လူတွေအတွက်ပါ။ Lucifer ကို Quality ကောင်းကောင်းနဲ့သိမ်းထားချင်တဲ့သူတွေအတွက်
ကျွန်တော်တို့ Mmsubtitles ကနေပြီးတော့မှ ဘာသာပြန်ပြီး တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Lucifer (Season 4) Episodes
#Lucifer (Season 4) #Download Lucifer (Season 4) Full Movie #Free Lucifer (Season 4) Download
3 responses to “Lucifer (Season 4)”
990006 506510Hoping to go into business venture world-wide-web Indicates revealing your products or services furthermore companies not only to ladies locally, but nevertheless , to numerous prospective clients in which are online in most cases. e-wallet 721902
573661 892805Someone essentially lendahand to make critically articles Id state. That will be the first time I frequented your web site page and so far? I amazed with the research you produced to create this actual post extraordinary. Great activity! 868646
Stephane Dane says: